Bandow Xaley Ka Dhaqan Galay Dhuusamarreeb | RBC Radio	Home
Thursday, October 4th, 2012 at 02:52 pm	/ 25 Comments Sunday, July 15th, 2012 at 08:39 am Bandow Xaley Ka Dhaqan Galay Dhuusamarreeb
Dhuusamarreeb (RBC) Waxa xaley ka hirgalay magaalada dhuusamarreeb ee xarunta gobalka Galgaduud bandow soconaya 6-da maqribkii ilaa 6-da aroornimo, kaddib dibadbaxyo rabshado wata ay shaley halkaas ka dhaceyn.
Goobjoogayaal ku sugan Dhuusamarreeb ayaa sheegay in maamulka Ahlu Sunna ee gobalada dhexe ay bandow xaley saareen magaalada, taas oo lagu doonayo in lagu xaqiijiyo ammaanka.
Ma cadda in dad lagu qab-qabtay intii bandowga uu socday, waxana lagu soo waramayaa in xaaladda magaalada ay saaka degantahay oo wax rabshado aysan kajirin.
Magaalada ayaa shaley waxa ka dhacay dibad-bax looga soo horjeedo in shaqada ay joojiyaan guddiga caalamiga ah ee horumarinta dadka (CISP) oo gacanta ku hayay isbitaalka degmada Dhuusamarreeb.
Dad careysan oo isku soo baxay ayaa lagu soo waramayaa in ay xireen qaar ka mid ah waddooyinka magaalada, waxayna ku dhawaaqayeen erayo ay ku muujinayeen sida ay ugu xun yihiin xirnaanshaha isbitaalka guud ee degmada Dhuusamarreeb sida ay lee yihiin wariyaasha ku sugan dhuusamareeb.
Ilaa hadda kama hadliin maamulka Ahlu Sunna ee gobalada dhexe oo ku aadan shaqo joojinta ay sameesay hey’addan (CISP) oo gacanta ku haysay isbitaalka degmada Dhuusamarreeb.
Sida la sheegayo guddiga caalamiga ah ee horumarinta dadka (CISP) oo gacanta ku hayay isbitaalka magaalada Dhuusamarreeb ayaa Khamiistii la soo dhaafay isbitaalka ku wareejiyay maamulka Ahlu Sunna ee ka arrimiya halkaas, waxana ay u sababeeyeen dhaqaalo dari la soo daritay taas oo keentay in aysan shaqadooda sii wadi karin.
Toddobaadkii hore ayaa Dr. Abdi Tarri oo ah madaxa CISP ee gobolka Galgaduud oo shir jaraa’id ku qabtay Dhuusamarreeb uu sheegay in duruufo la soo gudboonaaday ay ku khasabtayn inay joojiyaan howshii isbitaalka.
Madaxa CISP ayaa sheegay in isbitaalka lagu daweeyay 30,000 oo qof tan iyo markii lagu wareejiyay hay’addiisa, iyadoo qalliin lagu sameeyay 270 haween ah, lana daweeyay 18,000 iyo 200 oo carruur ah.
Tags: Bandow Xaley Ka Dhaqan Galay Dhuusamarreeb	2 Responses for “Bandow Xaley Ka Dhaqan Galay Dhuusamarreeb”
Bandow Xaley Ka Dhaqan Galay Dhuusamarreeb | Gubta News Network says:	July 15, 2012 at 8:49 am	[...] Originally posted here: Bandow Xaley Ka Dhaqan Galay Dhuusamarreeb [...]
hershi says:	July 16, 2012 at 3:00 am	Ahlul sunnow ma dawladaad ka mid tahay misa etobiyaad hoos tagtaan misa al shabaab ISCADEEYA